Rag hubaysan oo 4 dhaqtar oo saddex tahay Syrian maanta ku dilay deegaanka Siinka-dheer (Dhegeyso) – Radio Daljir
Diseembar 18, 2013 2:54 b 0
Muqdisho, December 18, 2013 – Deegaanka Siinka-dheer ee duleedka Muqdisho waxaa goor dhowayd oo maanta ah lagu dilay 4 dhaqtar oo saddex ka mid ah ay u dhasheen dalka Siiriya, kuwaas oo howlo shaqo u joogay deegaanka.
Dr. Cabdikariin Sanwayne ayaa lagu sheegay magaca dakhtarka Soomaaliga ah raga la dilay ku jiray.
Maamulka Cisbitalka Fiqi ee ay ka howl-gelayeen dhakhaatiirta la dilay waxay xaqiijiyeen in ragii dilka geystay ay baxsadeen.
?Niman dhakhaatiir ah oo Syrian ah bay ahaayeen, saaka markay shaqada u soo socdeen ayaa niman hubaysan oo baabuurta wata ay dileen.? Ayuu yiri Dr. Fiqi oo maamulka cisbitalka ay ka howl-gelayeen dkhaatiirta.
Cisbitalka Fiqi ee ku yaala deegaanka Siinka-dheer ayey waayihii dambe ka shaqaynayeen dakhaatiirta maanta la dilay, sidoo kale waxaa jiray goobo caafimaad oo kale oo ay iyana shaqooyin ka hayeen maalmaha qaar.
Agaasimaha cisbitalka Fiqi ee deegaanka Siinka-dheer, waxaa uu xaqiijiyey in dhakhaatiirta la laayey ay qaabilsanaayeen xanuunada kelyaha, Oof-mareenka, lafaha iyo xanuuno kale oo dhowr ah.
Kooxda Al-shabaab ayaa loo badinayaa inay dilka ka dambeeyeen in kastoo aysan iyagu sheegan ilaa haatan.
Dhegeyso: – Dr. Fiqi oo u waramay idaacada risaala ee Muqdisho oo aan xiganay